Fortnite ဂိမ်းကို ဘာကြောင့် တခြား Android ဖုန်းတွေမှာ ဆော့လိုမရတာလဲ ? | Myanmar Mobile App
Home Trending App/Game Fortnite ဂိမ်းကို ဘာကြောင့် တခြား Android ဖုန်းတွေမှာ ဆော့လိုမရတာလဲ ?
Fortnite ဂိမ်းကို Samsung နဲ့ အခြားAndroid ဖုန်းတွေမှာ ဘီတာအနေနဲ့ ဆော့ကစားလို့ရပြီး အခြားဖုန်းတွေမှာ support မလုပ်တာလည်းဆိုရင် သူ့မှာသတ်မှတ်ချက်တွေ ရှိနေပါတယ်။ အဲ့ဒါကတော့ OS ပိုင်းမှာဆိုရင် 64 bit Android, 5.0 (သို့) သူ့ထက်အမြင့်လိုပါတယ်၊ RAM ပိုင်းမှာတော့ 3GB (သို့) သူ့ထက်အမြင့်နဲ့ GPU ပိုင်းမှာဆိုရင် Adreno 530 (သို့) higher, Mali-G71 MP20, Mali-G72 MP12 (သို့) higher လိုအပ်ပါလိမ့်မယ်။ အဲ့လိုမဟုတ်ပဲ အခမဲ့ပေးထားတဲ့ လင့်တွေကဒေါင်းပြီး ဖုန်းမှာထည့်သွင်းလိုက်မယ်ဆိုရင် အဲ့ဒီဖုန်းမှာ GPU ပိုင်းဆိုင်ရာ လိုအပ်ချက်ရှိတယ်ဆိုပြီး Device Note Supported ဆိုတဲ့အသိပေးချက် ပြပေးမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
Fortnite ဂိမျးကို Samsung နဲ့ အခွားAndroid ဖုနျးတှမှော ဘီတာအနနေဲ့ ဆော့ကစားလို့ရပွီး အခွားဖုနျးတှမှော support မလုပျတာလညျးဆိုရငျ သူ့မှာသတျမှတျခကျြတှေ ရှိနပေါတယျ။ အဲ့ဒါကတော့ OS ပိုငျးမှာဆိုရငျ 64 bit Android, 5.0 (သို့) သူ့ထကျအမွငျ့လိုပါတယျ၊ RAM ပိုငျးမှာတော့ 3GB (သို့) သူ့ထကျအမွငျ့နဲ့ GPU ပိုငျးမှာဆိုရငျ Adreno 530 (သို့) higher, Mali-G71 MP20, Mali-G72 MP12 (သို့) higher လိုအပျပါလိမျ့မယျ။ အဲ့လိုမဟုတျပဲ အခမဲ့ပေးထားတဲ့ လငျ့တှကေဒေါငျးပွီး ဖုနျးမှာထညျ့သှငျးလိုကျမယျဆိုရငျ အဲ့ဒီဖုနျးမှာ GPU ပိုငျးဆိုငျရာ လိုအပျခကျြရှိတယျဆိုပွီး Device Note Supported ဆိုတဲ့အသိပေးခကျြ ပွပေးမှာ ဖွဈပါတယျ။
Previous articleSnapchat ကိုအသုံးပြုသူ ၃ မီလီယံလောက် ကျဆင်း
Next articleSamsung ရဲ့ နောက်ဆုံးထွက်ဖုန်းထက် အသစ်ထွက်ရှိမယ့် iPhone ကို စိတ်ဝင်စားသူပိုများ